Fiara 4X4 tapaka hisatra namoa-doza: mpandeha dimy indray namoy ny ainy | NewsMada
Fiara 4X4 tapaka hisatra namoa-doza: mpandeha dimy indray namoy ny ainy
Tandrevaka tsotra izao ny azo ilazana ny nahatonga ity lozam-pifamoivoizana, nahafatesana olona dimy, tamin’iny lalam-pirenena RN 1 Bis, anelanelan’i Maintirano sy i Tsiroanomandidy iny, afakomaly, ity. Efa fantatra mialoha ny tsy fetezana teo amin’ny hisatra, nefa mbola nentin’ny mpamily ihany ilay fiara.
Mitohy ihany ny lozam-pifamoivoizana ahafatesana olona. Niharan-doza ny fiara 4×4 iray mampitohy an’i Maintirano sy i Tsiroanomandidy afakomaly, tany Orimbato. Nivadika ilay fiara rehefa nisy olana teo amin’ny lafiny mekanika. Vokatr’izany, olona dimy indray maty, ankizy ny roa amin’ireo, ary telo ny olon-dehibe, olona sivy naratra. Nentina notsaboina haingana kosa ny naratra tany amin’ny hopitaly any Tsiroanomandidy.
Araka ny fanazavana, olana teo amin’ny hisatra nahatonga ny loza. “Efa fantatra mialoha, saingy tsy nisy fepetra noraisina nataon’ny mpamily fa nandeha ihany”, hoy ireo mpandeha naratra notsaboina any amin’ny hopitaly.
Mandray an-tanana ny raharaha ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana. Anisan’ny naratra ny mpamily ary miandry azy ny famotorana.
Efa maromaro rahateo, raha ny fanazavana, ny olona niteny azy io, saingy tsy nohenoiny. Nanohy ny dia ihany izy ary izao niafara tamin’ny loza izao. Efa nanambana izany ny loza, ary izao nahafatesana olona izao. “Nahatonga ny loza ny tsy fitandremana, ny tsy firaharahana ny hafa”, hoy ny mpandeha.
Mpamily mafy loha
Tamin’ireo loza nahafatesana olona ireo, nampitaraina ny olona ny afitsoky ny mpamily. Fandehanana mafy, fahafantarana fa efa misy olana ny fiara, mbola mandeha ihany. “Mafy loha ny mpamily ary tsy miraharaha ny ain’ny mpandeha. Efa fantany ny tsy fahatomombanana kanefa mandeha mafy ihany izy ireo”, hoy ny fanamarihan’ny mpandeha fiara, anisan’ny naratra tamin’ireny loza ireny.
Ilaina ny fandraisana fepetra henjana amin’ny mpamily mamoa-doza. Ankoatra ny fanasaziana, tsy tokony homena fahazoan-dalana hitondra fiara intsony izy ireo. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny olona mamily fiara fitateram-bahoaka. Aiza ho aiza tokoa ny famantarana ireo mpamily? Misotro toaka, salama saina sy vatana, mahay lalàna sy fepetra mifanaraka amin’ny lozam-pifamoivoizana? Rehefa tsy misy ireo fahafakeliny ireo, hiseho hatrany ny loza ahafatesana olona.